Izinyathelo zokufaka isidlidlizi sesikrini esijabulisayo | Haiside
You are here: Home / Izindaba / Uncategorized @zu / Izinyathelo zokufaka, ukulungisa iphutha nokuqapha kwe-vibrator screen...
2021-07-26 /in Uncategorized @zu /by admin
Kumelwe kufakwe i-vibrate exciter ezintweni zesikrini zemibono yokudlidliza imayini ukubona ukuhlolwa kwezinto. Isidlidlizi sesikrini esidlidlizayo yidivayisi esetshenziselwa ukukhiqiza amandla athokozisayo, angenza into ukuthi ijabule ithole uhlobo oluthile nobukhulu bokudlidliza, ngaleyo ndlela kudlidlize into. Ngaphezu kokunikeza amandla athokozisayo, i-exciter iphinde inqume imvamisa yokudlidliza ne-amplitude yesikrini esidlidlizayo. Ngakho-ke, ukufakwa okulungile kwesikhuthazi se-vibration kubaluleke kakhulu. Ngezansi, umhleli we-Hiside uzokhuluma ngezinyathelo zokufaka nokulungisa iphutha le-screen eshukumisayo.
Izinyathelo zokufaka isidlidlizi sesikrini esijabulisayo
1. Ngaphambi kokufaka isidlidlizi sesikrini esidlidlizayo, qala ubheke kuhlu lokupakisha ukuze uhlole ukuthi izingxenye ziphelele futhi zilimele.
2. Bheka umdwebo wokufaka ukufakwa. Uhlaka olusekelayo kufanele lufakwe ngokuvundlile esisekelweni. Isisekelo kufanele sibe nokuqina okwanele namandla okuxhasa yonke imithwalo enamandla futhi emile yesikrini esidlidlizayo.
3. I-trunnion yebhokisi lesikrini ingasetshenziselwa ukuphakamisa umshini wesihlungo, futhi isisefo sonke asikwazi ukulengiswa ngqo ku-exciter. Phakamisa i-exciter endaweni yokufaka, bese usebenzisa amabhawodi ukuthola amaphuzu amane ngokuvumelanayo. Faka ama-bolts anchor bolts, bese ulayishe kuqala.
4. Lapho ufaka isidlidlizi sokudlidliza, qiniseka ukuthi kukhona igebe elingama-75mm phakathi kwebhokisi lesikrini nezingxenye ezinganyakazi njengama-hopper kanye nemikhombe.
5. Susa isisabalalisi ngaphambi kokuqinisa amabhawodi wehange, qinisa amabhawodi e-exciter anchor ahlukaniswe ngomsele we-torque, bese uqinisa amabhawodi we-anchor ku-torque engaguquki.
6. Faka i-coupling nesembozo esivikelayo, gcina ibhulokhi eccentric efakwe esimweni semvelo, bese ufaka isivuseleli sokudlidliza nesembozo sokuvikelwa kokuhlangana. Ukufakwa kufanele kuqine futhi kuthembeke.
7. Gcwalisa okujabulisayo ngamafutha okugcoba, futhi izinga lamafutha nelawoyela lihlangabezana nezidingo.
8. Hlanza indawo. Bala amathuluzi, izinto zokwakha, izesekeli, nemfucumfucu esizeni. Isiza kufanele sihlanzeke futhi sihlanzeke. Ngemuva kwalokho kwaqala umsebenzi wokulungisa amaphutha we-screen vibrating exciter.
Izinyathelo zokulungisa amaphutha zokuthakazelisa okujabulisayo kwesikrini
1. Isikhuthazi kufanele sizungeziswe ngesandla (noma ezinye izindlela) ngaphambi kokuhlolwa. Umshini ungaqalwa kuphela lapho ukujikeleza kuguquguquka futhi akukho mkhuba wokuminyana.
2. Uma ulungisa iphutha, lungisa amandla okuzijabulisa, qala ususe isihlangu somoya. Khulula amabhawodi wokuqina we-counterweight, lungisa ibhulokhi le-eccentric kanye ne-counterweight yesikhuthazi esigabeni nange-engeli efanayo, noma wandise noma wehlise inani lezinto eziphikisayo, qinisa amabhawodi, uphinde ufake i-hood yomoya. Lungisa usayizi wamandla ajabulisayo ukuhlangabezana nezidingo zezinto ezahlukahlukene noma amandla wokucubungula wemishini ehlukahlukene yokudlidliza.
3. Isikhuthazi asinamsindo ongajwayelekile, akukho ukuvuza, futhi ukukhuphuka kwamazinga okushisa akukhuphi ama-degree angama-75 Celsius.
4. Umzila wesikrini esidlidlizayo ulayini oqondile, umehluko we-amplitude wamaphoyinti amane ungaphansi kuka-2 mm, kanti umehluko we-engeli wamaphoyinti amane ungaphansi kwezi-2 degrees.
Izinyathelo zokuphepha zokufaka nokulungisa amaphutha kwe-screen vibrator exciter
1. Lapho uphakamisa isivunguvungu sesikrini esidlidlizayo, ungasishayisisi lapho usidlulisa noma usifaka.
2. Ungahlukanisi izingxenye nezakhi ngokuthanda kwakho ngesikhathi sokufakwa. Lapho ufaka, hlola ukuthi izimbobo ze-anchor bolt ziyahambisana yini nezimbobo ze-plate bolt engezansi.
3. Ngemuva kokuthi kufakwe uhlobo lokudlidliza lohlobo lwesihlalo, kufanele lube lubheke phezulu ngokuvundlile futhi luhambisane nolayini osenkabeni womzimba wesikrini.
4. Vula umshini isikhashana bese ubheka ukuthi ngabe ukusebenza kokuzijabulisa kuyahlangabezana yini nezidingo (imiphini emibili yenjabulo kufanele ijikeleze ngezindlela ezingafani).
5. Amabhawodi wehange kufanele asebenzise imishudo yamandla futhi athathe izinyathelo zokulwa nokuxegisa ukuvimbela ukulimala kwenjabulo.
6. Isikhuthazi sokuthambisa uwoyela esincanyana sidinga ukuvula okupholile ukuze sinikeze uwoyela kuqala, sihlole ukuthi isifunda samafutha sidiliziwe yini, ukuthi kukhona yini ukuvuza kukawoyela, bese siqala ukuhlolwa lapho ipayipi lokubuyisa uwoyela liqala ukubuyisa uwoyela.
7. Musa ukuqaqa izingxenye ngokuthanda ngesikhathi sokufakwa. Ngemuva kokufakwa, okujabulisayo kufanele kube kuvundlile.
8. Amabhawodi axhuma i-exciter nebhokisi lesikrini ngamabhawodi anamandla amakhulu, angavunyelwe ukushintshwa ngamabhawodi ajwayelekile. Ukuqina kufanele kuhlolwe njalo futhi kanye ngenyanga. Ukuxegiswa kwanoma iyiphi enye yamabhawodi kuzodala nokuthi kunqunywe amanye amabhawodi, kudale umonakalo emshinini wesikrini.
Ngokufingqa, inqubo yokufaka isidlidlizi sesikrini esidlidlizelayo ukuqala uhlole ukuthi izingxenye ziphelele yini, bese uphakamisela isivuseleli endaweni yokufaka, ufake futhi uqinise amabhawodi wehange, bese uqinisa amabhawodi we-anchor ku-torque ebekiwe ebekiwe. Faka uwoyela wokuthambisa. Ngenxa yamandla ajabulisayo wesidlidlizi, isikrini esidlidlizelayo singasebenza ngokushelela ngaphandle kokujikisa nokujija, futhi sikhiqize umsindo ophansi.
Kwenzekani ekuphakeleni okungalingani kwesikrini esidlidlizayo? Thinta ukusebenza... Imiyalo yokusetshenziswa kwesikrini sokudlidliza komugqa